Wararka Maanta: Khamiis, July 30, 2020-Liiska boqolka qof ee Afrika ugu sumcadda badan oo lasoo bandhigay
Liiskan waxaa ku jira 47 haween ah iyo 53 rag ah oo ka kala yimid waaxyo kala duwan oo ay ka mid yihiin; Hogaaminta, Madadaalada, U doodista, Waxbarashada iyo Ganacsiga. Shuruudaha xulashada ayaa ah Daacadnimo, Muuqaal iyo saamayn.
Shakhsiyaadka aadka loo jecel yahay ee lagu soo bandhigay liiska waxaa ka mid ah: Raiisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, 2 Madaxweynayaal oo Afrikaan ah, hal Madaxweyne ku xigeen iyo siyaasad-sameeyeyaal.
Sannadkan waxaa ka soo dhex muuqday labo hablood oo Soomaaliyeed, oo kala ah, Ilwaad Elmaan, u dhaqdhaqaaq xuquuqda aadanaha iyo Faadumo Dayib, musharrax hore oo madaxweyne Soomaaliya.